Hab-Qorista Qumman ee Af Soomaaliga Cabdifataax Xasan Maxamed "Barawaani"
Wednesday 9th October 2019 11:35:29 in Aragtida Dadweynaha by Tafatiraha Guud
Hordhac Qoritaanka Af Soomaaligu waa uu ka duwan yahay dhihitaanka afka, ama waxa aynnu odhan karnaa
hadalka caadiga ah iyo dhigaalku waa ay kala geddisan yihiin. Waana muhiim in bulshadu iska toosiso afka Soomaaliga dhigaalkiisa saxda ah. Maadaama aanay jirin hadda dawlad u taagan ilaalinta afka Soomaaliga, bulshadiina aanay dawlad arrinkaas u heellan sugi karin, oo afka hadalkiisa iyo dhigaalkiisuba ay nolol-maalmeed ka mid yihiin, waxa lama huraan noqotay in qof walba inta karaankiisa ah uu bulshada u soo gudbiyo wixii uu ku dhaamo ee mawdduucaas ku saabsan.
Waxa kale oo dhibaatooyinkaas ka mid ah iyada oo la yaryareynayo xarfaha koowaad ee qoraalku ku bilawdo, iyada oo aan la dhuganayn shaqal iyo shibbane, hadduu yahay shaqal gaab iyo shaqal dheere, ama shibbane labalaabma iyo xaaladihiisa, iyada oo aan la tix gelinayn astaamaynta qoraalka ee joogsi, hakad, jiitin, wayddiin, yaab iyo qaar kale oo badanba leh. Dabadeed qoritaankii afku waxa uu soo baxay wax jaantaa rogan ah oo isku cayn iyo bayd go'an, kaas oo jid iyo jihana aan lahayn.
1.Shaqallada iyo Shibbanayaasha
Halkan kala deg qormada oo dhammaystiran: ... ( halkan geli lifaaqa qormada ee pdf-ka ah)
Qalinkii: Cabdifataax Xasan Maxamed "Barawaani"
"Waxa Bilaabmay Dhaqdhaqaaq Midnimo Doon Oo Si Weyn U Cabsi Geliyey Maamulka Somaliland" [Qoraa Maxamed Baashe
[Daawo:-] "Qadiyada Somaliland Ee 30 Jirsatay Diyaarad Hargaysa Loo raacay Laguma Xalin karo" Xasan Sheekh Ma
Hoggaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan Oo Shaaciyay Wakhtiga Uu Soo Bandhigayo Buuggiisii Labaad
"Farmaajo Waa In Uu Maxkamad Saara Kuwii Shacabka Xasuuqay" Siyaasi Maxamed Saleebaanweyne Oo Afka U Furtay Ma
[Daawo:-] "SNM Ma Jirto Raaligalin Ay Ka Bixineyso Wixi Dhacay Ta Farmaajana Ma aqblayno '' Siyaasi Maxam
[Top News:-] Loolanka Gudoomiyenimada Xisbiga KULMIYE Oo Xaraaradiisu Cirka Marayso & Maxamed Kaahin Oo Dhaq-dhaqaaq
[Breaking News:-] Suxufi Xasan Galaydh Oo Xabsiga Loo Taxaabay & Wararkii Ugu Dambeeyay.
[Daawo:-] Xisbiga Mucaaradka Ah Ee WADDANI Oo Si Kulul Ugu Jawaabay Wasiir Xasan Gaafaadhi.